10 Eyona Zoo Zintle zokundwendwela kunye naBantwana baKho eYurophu | Gcina A Isitimela
ekhaya > Travel Europe > 10 Eyona Zoo Zintle zokundwendwela kunye naBantwana baKho eYurophu
Ixesha lokuFunda: 7 imizuzu(Wagqibela ukuhlaziywa nge-: 27/11/2020)
Ukuhamba nabantwana ukuya eYurophu kunokuba ngumceli mngeni. ke, Kubaluleke kakhulu ukongeza izinto ezimbalwa abantwana abanokuzonwabela, njengokundwendwela enye ye 10 ezona zibalaseleyo eYurophu. Ezinye zezona zoo zibalaseleyo ehlabathini ziseYurophu. Kwintliziyo ye ezona zixeko zilungileyo eYurophu, kukho iindawo ezingcwele eziluhlaza, kwaye i 10 ezona zibalaseleyo zokundwendwela nabantwana baseYurophu.
izithuthi kaloliwe yeyona ndlela indalo ahambe. Eli nqaku yabhalwa ukuba afunde Train Travel kwaye yenziwa yi Gcina A Isitimela, Amatikiti oololiwe abiza kakhulu kwihlabathi.
Schonbrunn Zoo eVienna, ikwalikhaya le 500 iintlobo zezilwanyana, kusukela 1752. Njengokuba, eyona zoo indala eYurophu likhaya lendlovu yaseAfrika kunye nepanda enkulu. the 42 Iihektare zeViennese zoo zikwibhotwe kwaye zinomtsalane omangalisayo wabantwana nabazali.
Umzekelo, indlu enamahlathi ashinyeneyo kumyezo wezilwanyana yinto eyoyikekayo eyenziwe ngumntu enamahlathi emvula eneendudumo. Njengoko ujikeleza ukugcina iso ngaphandle kwee-otter ezincinci ezinamacwecwe kunye ne-vampire crabs. Ukwengeza, Indlu yebhere emhlophe, izingwe neengwenkala, Indlu yaseKoala kunye namanye amakhaya ezilwanyana ezintle alinde wena.
Ukungena kweSchonbrunn Zoo eVienna kukhululekile ngokupasa eVienna. Ungafika phaya nge-U4 Hietzing phantsi komhlaba.
2. 10 Best zoos eYurophu: IAlpine Zoo eInnsbruck
Ifunyanwa ngokumangalisayo Tyrol eOstriya, iAlpine zoo eInnsbruck likhaya elingaphezulu lee 150 iintlobo zezilwanyana. You’ll find this amazing zoo at the foot of the Nordkette mountain range in the Austrian Alps. ke, ukuba uceba uhambo losapho kwiiAlps, qiniseka ukwenza ixesha leAlpenzoo Innsbruck.
Abantwana bakho banokumangaliswa ngokupheleleyo ziibhere ezimdaka, Lynx, iinkozi zegolide, otters, kunye nomlilo. Ezi zezinye zezilwanyana ezimbalwa oza kuzibona kumyezo wezilwanyana iAlpine. Ngelixa abantwana bakho baya kuyithanda imfuyo, uya kuthathwa ngu imibono emangalisa.
Ungafumana kule zoo emangalisayo ngothutho loluntu, isuka e kumbindi wesixeko. Ngaphezu, kukho iindlela ezahlukeneyo zokupasa zoo kuhlahlo-lwabiwo mali, ukuze ubone yonke into.
3. Eyona Zoo iRiphabhlikhi yaseCzech: IPrague Zoological Garden
IPrague idume ngeebhulorho zayo ezintle, umbono obukekayo, bokwakha, namaqela. kunjalo, ababaninzi abantu abayaziyo malunga nomyezo wezilwanyana wasePrague, kwaye leyo yindawo ebekekileyo phakathi kweyona mizi yogcino-zilwanyana ibalaseleyo yaseYurophu ukutyelela abantwana.
o.5 yeekhilomitha ezizikwere zenza umzi wogcino-zilwanyana wasePrague yenye yezona zilwanyana zinkulu eYurophu, izindlu ngaphezu 4000 izilwanyana. Ngaloo ndlela, kukho intente eninzi kunye nezilwanyana zokubulisa, umzekelo, Elephants, Bikira, igorila enobubele, kunye nezinye izilwanyana ezizodwa kwaye ezintle.
Prague zoological igadi ivuliwe yonke imihla kwaye iyafikeleleka ngebhasi okanye itramu. Ingcebiso yethu yokonwaba kosapho ePrague kukucwangcisa uhambo losapho olugcweleyo ukuya kumzi wezilwanyana ePrague kuba abantwana bakho bafuna ukuyihlola yonke.
4. 10 Best zoos eYurophu: Igadi yeZoological yaseBerlin
The oldest zoo in Germany is home to some of the extraordinary animals in the world. The Chilean flamingo and African Penguin are just a few of the special residents you’ll meet on your family visit to the Berlin zoo. Izilwanyana ezinqabileyo nezingaqhelekanga zenza iBerlin yenye yezona ndawo zilungileyo zokutyelela abantwana bakho eYurophu.
Igadi yeZoological yaseBerlin ikumbindi we ezona zixeko zinomdla eYurophu, kwaye umyezo wezilwanyana akunjalo. Ukuba uhlala edolophini impelaveki ende, ngokuqinisekileyo kuya kufuneka wenze ixesha losuku kumyezo wezilwanyana, iiplanga, kunye ne-aquarium.
Enye yezona zinto zibalaseleyo ngale zoo kukuba zikhona amaxabiso akhethekileyo etikiti kwiintsapho ezincinci okanye ezinkulu, ukungena okukodwa kumyezo wezilwanyana, okanye combo ngokungena kwi-aquarium.
5. Eyona Zoo ipholileyo eHamburg: Zoo Hagenbeck
IHamburg intle kakhulu indawo yokuqhekeza isixeko, kunye nesixeko esimnandi ukutyelela abantwana. IHagenbeck Tierpark eHamburg ngomnye umzekelo wezinto ezimnandi zokwenza eHamburg nabantwana. Ngenye yezona ndawo zipholileyo kunazo zonke eYurophu naseJamani. Ikhaya elinomoya ovulekileyo ngaphezulu kwe 1,800 izilwanyana, le zoo kumnandi Ocean Arctic. Ulwandlekazi lweArctic kulapho uqala khona ukonwaba kusapho, Kwaye undwendwele iibhere ezimhlophe, oonombombiya, kunye neebhere zaselwandle.
Ukuba useHamburg iintsuku ezimbalwa, ke kuya kufuneka ufumane iKhadi leHamburg. Ngale ndlela uyakonwabela izaphulelo ezinkulu utsalo lwezotyelelo, kunye nezaphulelo kumyezo wezilwanyana kunye nakwi-tropical aquarium kumyezo wezilwanyana.
Amaxabiso eBerlin aya eHamburg
Bremen ukuya eHamburg Amaxabiso oololiwe
IHanover ukuya eHamburg Amaxabiso oololiwe
Cologne ukuya Hamburg Qeqesha amaxabiso
Enye yezona ziphezulu 10 eyona mizi yogcino-zilwanyana eYurophu yi-Antwerp Zoo. Njengazo naziphi na ii-zoo ezimangalisayo kuluhlu lwethu, eAntwerp Zoo ungabona izilwanyana ezintle ehlabathini. kunjalo, enye yezinto ezahlula i-Antwerp Zoo kwezinye ii-zoo, yinkqubo ekhethekileyo yezilwanyana ezisengozini, njengeebhonobos kunye neokapi.
Eyona zoo eBelgium iye yanda kakhulu ebudeni beminyaka. Umyezo wezilwanyana ukhule kakhulu kangangokuba awukho kumbindi wesixeko, kufutshane kakhulu kwisikhululo Central. Ngaphezu, I-Skywalk yomyezo wezilwanyana iya kutyhila kakhulu umbono ophefumlayo we-panoramic yegadi kunye nenye ye iidolophu ezise-Europe.
7. La Palmyre Zoo eLes Mathes, Fransi
Indawo entle yaseLes Mathes eLa Palmyre imi kumahlathi aluhlaza nakwiindunduma. Kukho iindlela eziphawuliweyo ezikuthatha kunye nabantwana kuhambo olujikeleze umhlaba wezilwanyana kunye nemimangaliso yendalo kwenye yezona zilwanyana zigqibeleleyo eYurophu..
Iingonyama zaselwandle zasendle kunye neekati zasendle, Iicarreabean flamingo, kunye noofudo abakhulu, zimbalwa zezilwanyana ezizodwa oza kudibana nazo. Le zoo intle ibekwe kummandla we-Aquitaine eNtsha eFrance, kunxweme lweAtlantiki, a great adventure from EParis ngololiwe.
8. Artis Zoo eAmsterdam
nje 15 imizuzu ukusuka kumbindi wesixeko, uya kufumana umzi wogcino-zilwanyana wokuqala eAmsterdam kwaye yenye yezona ndawo zokugcina izilwanyana zibalaseleyo eYurophu. IArtis Royal Zoo likhaya leqwarhashe, amabhabhathane, intlanzi yetropiki, kunye nezinto ezincinci eziza kubamba abantwana bakho, e UBUGCISA-Micropia.
A Ukutyelela i-zoo yaseAmsterdam yenye yezona zinto zintle zokwenza usapho eAmsterdam. Ngeentente ezininzi, Ukuya kwi-aquarium, nemithi emide yom-oki, iArtis Zoo eAmsterdam yenye yeendawo ezintle kunye iindawo ezizodwa zokundwendwela xa use-Netherlands.
Kungcono uthenge iArtis Zoo kunye netikiti leMicropia ukonwabela yonke into iAmsterdam Royal zoo enikezela ngayo.
9. Eyona Zoo iNgilane: UChester Zoo
Eyona zoo inkulu eNgilani ikhoyo ICheshire kwaye likhaya elingaphezulu kwe- 35,000 izilwanyana. I-Chester zoo yenye yezona zilwanyana zibalaseleyo eYurophu ukutyelela abantwana bakho kuba kukho izilwanyana ezininzi kunye negadi onokuyihlola. Kukho izilwanyana ezivela kwihlabathi liphela, njengee-lemurs, uphondo olukhulu, uphondo, kunye nezinye izilwanyana ezizodwa.
kwakhona, ukuba unexesha lokukhulisa usapho lwakho, Qiniseka ukuba undwendwela iigadi ezithandekayo kumyezo wezilwanyana. Ukuqokelelwa kweentyatyambo eChester zoo kunegama elaziwa kwihlabathi liphela, neeorchid zibalasele ngokupheleleyo. Ukutyelela i-Chester zoo yinto efanelekileyo yentsapho yangaphandle.
10. Best zoos eYurophu: I-Basel Zoo eSwitzerland
Eyona zoo intle eSwitzerland ikumbindi weBasel. I-Basel zoo likhaya kwizilwanyana ezivela kwihlabathi liphela, kwaye uya kufumanisa sonke isilwanyana esinye kumhlali waso wendalo kwiindawo ezahlukeneyo ezibiyelweyo.
Enye into emangalisayo ebeka iBasel zoo yethu 10 ezona zibalaseleyo eYurophu, ngumyezo wezilwanyana wabantwana. Apha abantwana bakho baya kufumana ithuba elingenakuthelekiswa nanto lokudibana nezilwanyana zasekhaya kwihlabathi liphela, isilwanyana sasekhaya, kwaye ubondle.
Ukutyelela kumyezo wezilwanyana ngumsebenzi ongaphandle omangalisayo wosapho lonke. Izitiya eziluhlaza namahlathi, izilwanyana ezingaqhelekanga kunye nezityalo, iya kubonwabisa kwaye bonwabise abantwana. the 10 ezona zibalaseleyo eYurophu ukutyelela abantwana bakho, zizinto ezifihliweyo zaseYurophu, Kwaye kufanelekile ukuba uhambe usuku lonke.
EMunich ukuya eBasel amaXabiso oLoliwe
UBern waya kumaxabiso eBasel oQeqesho
IGeneva ukuya kumaBasel amaXabiso oLoliwe
Apha Gcina A Isitimela, siya kukuvuyela ukukunceda uceba utyelelo emangalisayo zoo best eYurophu ngololiwe.
Ngaba ufuna ukufaka iposti yethu yebhlog "I-10 zoo zoLungileyo zokundwendwela nabantwana bakho eYurophu" kwindawo yakho? Ungakhetha noba inanilethu iifoto kwaye okubhaliweyo kwaye asiphe credit kunye unxulumaniso kwesi hetalia us. Okanye nqakraza apha: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fbest-zoos-visit-kids-europe%2F ‎- (Skrolela phantsi kancinci ukuze ubone Code lungisela)